जाजरकाेटमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु , घाइतेको अबस्था कस्तो छ ? | समाचार
जाजरकाेटमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु , घाइतेको अबस्था कस्तो छ ?
November 3, 2021 NepstokLeaveaComment on जाजरकाेटमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु , घाइतेको अबस्था कस्तो छ ?
जाजरकोट– नलगाड नगरपालिका-५ झुल्केडाडामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ। नलगाडकाे कालीमाटीबाट बारेकोट गाउँपालिकाको सेपुखोला जाँदै गरेको ट्याक्टर मंगलबार दिउँसाे दुर्घटनामा परेकाे हाे । ट्याक्टर नम्बर खुलेको छैन ।
दुर्घटनामा नलगाड-५ का चंकलाल विक, सुरेश खत्री र बलबहादुर खत्रीकाे ज्यान गएकाे हाे। नलगाड-८ का विनोद परियार घाइते भएका छन्। घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको डीएसपी मधुकुमार थापाले जानकारी दिए। ट्याक्टर नम्बर खुलेको छैन।
त्यस्तै, बाढी पहिरामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत
गत आसोज ३१ गतेदेखिको लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरामा परी ज्यान गुमाएका सायल गाउँपालिकाका पीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करबहादुर विष्टले उक्त क्षेत्रमा पुगेर राहत रकम प्रदान गर्नुभएको हो ।
बाढीपहिरामा ज्यान गुमाएकालाई प्रतिपरिवार रु दुई लाखका दरले रकम प्रदान गरिएको छ । जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि राहत वितरण गरिने प्रजिअ विष्टले बताउनुभयो । सायल गाउँपालिका–१ रोकाया गाउँका वीरे रोकाया, वडा नं ४ भल्माका जङ्ग विष्ट, वडा नं ५ डुमरीका हिरुवा लुहार र सोही वडा भालुमेलाका देव डुम्रेलका परिवारका सदस्यलाई रु दुई दुई लाख तथा वडा नं ६ अम्ततोडाका आशिष कुञ्जेडा र सागर कुञ्जेडाका बुवा दिलबहादुर कुञ्जेडालाई रु तीन लाख हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डोटी शाखाले पीडित परिवारलाई भाँडाकुँडा, कम्बल र लुत्ताकपडा प्रदान गरेको छ । यस्तै शिखर नगरपालिका–११ मा बाढीपहिरामा परी मृत्यु भएकी मन्धरी वलायरका आफन्त, वोगटान गाउँपालिका–५ का मृतक चनरी नेपालीका श्रीमान् इन्द्र नेपालीलाई समेत राहत रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्लामा बाढीपहिराबाट १५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक बेपत्ता छन् । अहिलेसम्म कम्तीमा रु एक करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
क’ठै यो कस्तो बि’जोग ! मोरङका ३५ बर्षीय सुवासलाई यो के आ’इलाग्यो यस्तो ?
November 1, 2021 Nepstok
रेडियो नेपाललाई चाहियो ३९ जना कर्मचारी (सूचना हेर्नुस्)
November 12, 2021 Nepstok
हरिबोधनी एकादशीमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
November 15, 2021 Nepstok